नेकपा (मसाल) को केन्द्रीय समितिको वैठक यही २०७१ साल बैशाख २०देखि २४ गतेसम्म सम्पन्न भयो । त्यो वैठक मुख्य रूपले पार्टीको आठौँ महाधिवेशनको तयारीको सिलसिलामा देशव्यापी रूपमा शुद्धीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना गर्ने सन्दर्भमा गरिएको थियो । वैठकको पछिल्लो दिन देशको तात्कालिक परिस्थितिबारे पनि विस्तृत छलफल गरेर कतिपय निर्णयहरू गरिएका छन् । उक्त निर्णयहरूबारे जानकारी गराउन यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
केन्द्रीय समितिको त्यो ५ दिने प्रशिक्षण कार्यक्रमपछि देशव्यापी रूपमा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ । त्यसरी महाधिवेशन पूर्व पार्टीका सदस्यहरूको सैद्धान्तिक स्तरलाईमाथि उठाएर पार्टीका सदस्यहरूको दृष्टिकोण, अनुशासन, सक्रियता र जिम्मेवारी वा पार्टीको सम्पूर्ण सङ्गठनात्मक प्रणालीलाईमाथि उठाउने प्रयत्न गरिनेछ, जसबाट पार्टी महाधिवेशनपछि बढी सही र प्रभावकारी राजनैतिक भूमिका खेल्न सफल होस् । वैठकले शुद्धीकरण प्रशिक्षणसम्बन्धी एउटा प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ, जसलाई छिट्टै सार्वजनिक गरिनेछ । त्यसमा खुल्ला बहस चलाइनेछ । त्यसमा पार्टीमा आज भएका कमजोरीहरूबारे स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ र तिनीहरूबारे पार्टी बाहिर खुल्ला बहस र पार्टीभित्र प्रशिक्षण कार्यक्रमको सञ्चालन गरेर विद्यमान अवस्थामा सुधार गर्ने प्रयत्न गरिनेछ ।
वैठकले सर्वप्रथम दोस्रो संविधान सभाको चुनावपछिको देशको स्थितिमाथि विचार गर्‍यो । घटनाक्रम वा विभिन्न राजनैतिक शक्तिहरूको भूमिकाको जुन प्रकारको विकास भैरहेको छ, त्यसमाथि विचार गर्दा समयमा नै संविधान बन्ने कुरामा आशङ्का बढ्दै गैरहेको छ । संविधान सभाको चुनावमा जनताले स्पष्ट रूपले जातिवाद र क्षेत्रीयतावादका विरुद्ध मतदान गरेका थिए । आज, एकातिर, जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी वा तिनीहरूका पक्षधर राजनैतिक शक्तिहरूको दबावमा जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी प्रकारको संविधान बन्ने वा संविधान नै नबन्ने आशङ्का बढ्दै गएको छ । त्यो अवस्थामा हाम्रो पार्टीले जनादेश अनुसार समयमा नै लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ । त्यसका लागि संविधान सभाभित्र लगातार जोड दिँदै जानुका साथै देशव्यापी रूपमा जनदबावको सिर्जना गर्ने पनि हाम्रो प्रयत्न हुनेछ ।
चुनाव पूर्व सबै प्रमुख राजनैतिक शक्तिहरूले चुनावपछि लगत्तै स्थानीय चुनाव सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता प्रकट गरेका थिए । तर अहिले त्यो चुनाव नहुने प्रकारको स्थितिको सिर्जना हुँदै गैरहेको छ । खास गरेर एमाओवादीले आफ्ना पहिलेको प्रतिवद्धताका विरुद्ध स्थानीय चुनावको विरोध गरिरहेकाले र सत्तारुढ राजनैतिक शक्तिहरूले स्थानीय चुनावबारे आफ्नो प्रतिवद्धता अनुसार स्थानीय चुनाव गराउन दृढ नीति अपनाउन नसकेकाले स्थानीय चुनाव हुने सम्भावना कम हुँदै गैरहेको छ । एमाओवादीले संविधान सभाको चुनावमा नराम्ररी हार भएकाले स्थानीय चुनावमा पनि त्यही प्रकारको पराजयको डरले स्थानीय चुनावको विरोध गरिरहेका छन् भने सत्ता पक्षले पनि उनीहरूको दबावमा आएर स्थानीय चुनाव गराउने आफ्नो प्रतिवद्धताबाट पछाडि हट्न खोजेको पाइन्छ । हाम्रो पार्टीले सत्तारुढ र प्रमुख विपक्षी राजनीतिक शक्तिहरूका त्यस प्रकारको नीतिहरूको विरोध गर्दै शीघ्र स्थानीय निर्वाचन गर्नु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ ।
न्यायाधीश सिफारिस प्रकरणप्रति पनि हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । त्यस सन्दर्भमा सर्वप्रथम, प्रधान न्यायाधीशको सुनुवाइ प्रकरणमा प्रधान न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मालाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्तिका विरुद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष का. चित्रबहादुर के.सी. ले मात्र अडान लिएकोमा हाम्रो पार्टीले उहाँको अडानलाई समर्थन गर्दछ । अहिले पनि न्याय परिषदले जुन प्रकारका व्यक्तिहरूलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमा सिफारिस गरेको छ, त्यसप्रति हाम्रो पार्टीले गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ । त्यो क्रममा कतिपय निष्पक्ष, स्वतन्त्र र निर्भिक भूमिका भएका न्यायाधीशहरूलाई पञ्छाउने र आफ्ना कार्यहरूका कारणले बढी विवादित भएका व्यक्तिहरूलाई नै न्यायाधीशहरू नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने काम भएको छ । न्यायाधीशहरूको त्यस प्रकारको गलत प्रकारको सिफारिसका पछाडि कतिपय प्रमुख राजनैतिक शक्तिहरूको भ्रष्ट दृष्टिकोणले पनि काम गरेको पाइन्छ । त्यस प्रकारका व्यक्तिहरूको न्यायाधीशको नियुक्तिबाट सर्वोच्च अदालतको छवि र स्वतन्त्र भूमिकामा अरू आँच पुग्ने तथा सम्पूर्ण न्यायपालिकाको संरचना धरासायी हुने आशङ्का छ । त्यसैले न्यायाधीशको उक्त सिफारिसबारे संसदीय सुनुवाइमा निस्पक्षता र निर्भयतापूर्वक विचार गरेर सही निर्णय गरिनेछ भन्ने आशा गर्दछौँ । त्यस प्रकारका न्यायाधीशहरूलाई सिफारिका लागि न्यायपरिषद मुख्य रूपले जिम्मेवार छ ।
संविधान सभा वा व्यवस्थापिका�संसदको एउटा अधिवेशनको अन्त भैसक्दा पनि सरकारले मनोनित गर्ने २६ जना सदस्यहरूलाई नियुक्त गर्ने काम अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । उक्त २६ जना सभासदहरूमा विभिन्न प्रकारका विशेषज्ञ वा विभिन्न क्षेत्रहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तित्वहरूलाई सभासदहरूमा मनोनित गर्नु नै सही कुरा हो । तर त्यसको सट्टा राजनैतिक भागवण्डाको आधारमा उक्त सभासदहरूलाई नियुक्त गर्नु सही हुन्न । २६ सभासदहरूको मनोनयन गर्दा विभिन्न विशेषज्ञ वा क्षेत्रहरूको प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ ।
बागलुङमा ने.का. ले हाम्रा कैयौँ कार्यकर्ताहरूलाई झुटा आरोप लगाएर मुद्दा हाल्ने काम गरेको छ र त्यसको परिणामस्वरूप हाम्रा कैयौँ साथीहरूलाई जेलमा हालिएको छ । हाम्रो पार्टीले सबै मुद्दा खारेज गरी सबै बन्दीहरूलाई रिहा गर्नु पर्ने माग गर्दछ । पूर्वोत्तर भारतमा बोडो आतङ्कवादीहरूले त्यहाँ बसोबास गर्ने नेपालीहरूलाई त्यहाँबाट निस्केर जाने, नत्र उनीहरूमाथि कारवाही गर्ने धम्की दिएका छन् । त्यसले त्यहाँका प्रवाशी नेपाली मात्र होइन, भारतीय नागरिक भएका नेपालीहरूमा समेत आतङ्क फैलिएको छ र उनीहरूको जीवन असुरक्षित भएको छ । हाम्रो पार्टीले पूर्वोत्तर भारतका नेपालीहरूको सुरक्षाका लागि प्रभावशाली कदम उठाउन नेपाल सरकारसित माग गर्दछ ।